UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-France | IXESHA LOKUPHUMELELA 100% ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUGQIBELA laseFrance, ukuFudukela kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala eFrance ngokutyala eFrance, ukuhlala ngokutyala eFrance, ukuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali eFrance,
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eFrance naseGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eFrance:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance
● Ubummi ngotyalomali oluvela eFrance
● IVisa yegolide eFrance
● Ipasipoti yesibini evela eFrance
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eFrance basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eFrance kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eFrance, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eFrance, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eFrance, ukuhlala okwesibini kutyalo-mali eFrance, ukuhlala kubini ngokutyala imali eFrance, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali eFrance. , Ukuhlala ngokusisigxina ngokutyala imali eFrance, ukuhlala okwethutyana ngotyalomali eFrance, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo mali eFrance, ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo mali eFrance, ubummi ngotyalo mali eFrance, ubummi ngeenkqubo zotyalo mali eFrance, ubumi ngenkqubo yotyalo mali eFrance, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eFrance, ubumi bobabini ngotyalo-mali eFrance, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eFrance, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eFrance, iinkqubo zoBumi kwezoqoqosho eFrance, Ubummi ngesikimu sotyalo mali eFrance, Ubumi ngezikim zotyalo mali eFrance, okwesibini ipaspoti eFrance, iinkqubo zesibini zokundwendwela eFrance , Inkqubo yesibini yokundwendwela eFrance, ipasipoti yesibini yesibini eFrance, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eFrance, ipaspoti yesibini yozakuzo eFrance, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eFrance, ipasipoti yesibini yokuba ngabemi eFrance, iskim sepasipoti yesibini eFrance, izikimu zepasipoti zesibini eFrance. , i-visa yegolide eFrance, ii-visa zegolide e-France, iinkqubo ze-visa zegolide e-France, i-visa yegolide e-France, i-visa yesibini yegolide e-France, i-visa yesibini yegolide e-France, i-visa yegolide e-France, ubumi kunye ne-visa yegolide e-France, indawo yokuhlala kunye ne-visa yegolide eFrance, ubumi begolide begolide eFrance, isikimu segolide sokundwendwela eFrance, izikimu zevisa zegolide eFrance.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eFrance ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eFrance lokuhlala kwakhona ngotyalomali: EUR 10,000,000
Intshayelelo eFrance kunye nokuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda kabanzi malunga neFrance
IFransi yenye yezona zizwe zithandekayo nezicocekileyo eYurophu. Umoya omangalisayo, ukutya okumangalisayo, kunye nenkcubeko yokuntywila kuyo. Ngethuba lokuba ithuba lokubona i-Eiffel Tower suku ngalunye kwaye ufumane iwayini engakholelekiyo nge-3 euro / ibhotile ayonelanga, azikho ezinye izizathu ezininzi ezenza ukuhlala eFrance kungummangaliso. Nangona iveki yomsebenzi yeeyure ezingama-35, nangaphezulu, ilivo, kunokuba yinyani, amaFrentshi ayayiqonda indlela yokugcina ulungelelwaniso olufanelekileyo lobomi / lomsebenzi. Isizathu esinye sokuvala iivenkile kunye nolawulo ngentsimbi yesi-7 ngokuqinileyo, kukuba abasebenzi baxabise isidlo sangokuhlwa nosapho emva ekhaya.
Izibonelelo ezingaphezulu: isidlo sasemini seyure, esihlawulwa ngokubanzi ngumbutho njengeziponi zesidlo sangokuhlwa. Kananjalo, akukho nto imbi ngokuba neglasi yewayini kunye nokutya kwakho kwaye ubuyele kwishishini emva koko. AmaFrentshi aneentsuku ezingama-30 zohambo oluhlawulelweyo, eqala ukuqokelela kanye xa beqeshile. Ukongeza, banikela ingqalelo kukhenketho kwaye bahamba nganye yeentsuku ezingama-30 ngaphandle kwendawo yokusebenza rhoqo ngonyaka kodwa basaziva bengavunywanga ukuba kude ngaphambi konyaka. Ngapha koko, nangayiphi na indlela, imilo okanye ifom, musa ukuceba ukwenza izinto ngo-Agasti! Uya kulungelelaniswa kwakhona ngokuqala nomphenduli ozenzekelayo emva koko uye kokulandelayo. Ngokwenyani, wonke umntu uhamba kude, etshisa ilanga kwindawo ethile eMantla eCorsica.
Umthetho wase-France othintela abameli ekukhangeleni imiyalezo yemiyalezo emva kwentsimbi yesi-6 wenze ukuthanda kakhulu malunga newebhu. Ngelixa bekugwetywe ngokungafanelekanga, bekungafanelekanga ukuba uqikelele ukuba abantu ohamba nabo baseFrance kufuneka bafikeleleke ngaphandle kwithayimthebhile yabo yokusebenza. AmaFrentshi ziingcali zokukhubazeka kwaye bakhethe ukutyala amandla abo asimahla ngaphandle - ukunyuka, ukuhamba ngephenyane okanye ukuhamba ngaphandle kwilizwe elivulekileyo. Unokufumana i-BA yakho okanye i-BS nge-181 nje ye- € (225 $) minyaka le kwaye ukhethe iimviwo zasemva kwesidanga se- € 250 (310 $) ngonyaka! Ukuyila izikolo yi-smidgen ebiza kakhulu ngeendleko zemfundo ze- $ 596 zonyaka kunye nokufumana i-Ph.D. eFrance iya kukubiza i- € 380 ngalo lonke ixesha lezifundo. Iiyunivesithi zabucala (cinga umthetho kunye nezikolo zeklinikhi) zibiza ngaphezulu, nangona kunjalo, zisesezingeni eliphakathi kunye neendleko ezisuka kwi- € 3.000 ukuya kwi- € 10.000 minyaka le.
Ukongeza, kukho umthwalo omkhulu weegranti ofikelelekayo kwizifundo ezingaqhelekanga zokukunceda ngokufihla iindleko zakho zokuhlala. Ngaphandle kokuhamba ngaphezulu, ungaba nesifundo esiphantsi ixesha elide eFrance, uchithe malunga ne-700-800 € inyanga nenyanga kubandakanya yonke into.
Iibhothi zolwandle zingakuxabisa ukuhlala kwilanga naphi na eCote d'Azur (kwaye ngokufihlakeleyo ndifuna ukudibana nomntu othandwayo). Ewe, amanzi ashushu apha ngawona mbala uluhlaza uwabonayo kwimifanekiso. Okanye kwakhona kubhetele, hit eCorsica kule ntwasahlobo-imida yolwandle kunye neentaba ezimdaka kwindawo yebhodi. Amanxweme olwandle apha angcono kakhulu kunaseFrance Reverie kwaye ndicebisa ngokwenene ukwenza ukuphambukiswa kwesi siqithi kwezona ndawo zidumileyo zomoya! Eyona ntlabathi inkulu eYurophu- iDune yePilat imalunga ne-60km ukusuka eBordeaux. I-mass mass - kunjalo, kukho i-7 eFransi. Uthando luguquguqukayo kukhenketho? Kuthekani ngekayaking eGorges du Tarn okanye ukunyuka ujikeleze iGorges du Verdon- kuyacaca ukuba yeyona ndawo intle yaseYurophu.
Inani elikhulu kakhulu lokhathalelo lwabantwana kunye nolawulo lwangaphambi kokufundiswa lugutyungelwe ngokupheleleyo ligunya loluntu. Kukho ulwabiwo olungaqhelekanga lokhathalelo lwabantwana ekhaya kunye nezibonelelo ezizodwa zokuba nomntwana ongaphezulu kwesinye - ukusuka kwimali eyongezelelweyo ukwehlisa uvavanyo kunye nemida ebalulekileyo yokuhamba. Abasetyhini bayacelwa ukuba bathathe amagqabi okubeleka kwaye bafumane imbuyekezo epheleleyo malunga neenyanga ezine. Ootata ngokufanayo banokuthatha ixesha elingangeentsuku ezili-11 zekhefu lokuzala ngaphandle kokunqongophala komvuzo. Igunya likarhulumente longeza likuhlawula ukuya kuthi ga kwi-1 846.15 ye- € kwimeko apho ungathanda ukwamkela umntwana. Ngokusisiseko, njengentokazi unesigqibo esinzulu ekufuneka usenzile: yiya emsebenzini kwaye uzise i-1.500-2.000 ye-euro inyanga nenyanga uhlawule okanye uhlale ekhaya, wonakalise abantwana bakho de babe ne-20 kwaye bajikeleze i-1.200 ye-euro kuloo nto. Okwangoku, bafazi, unokukhetha ntoni?
Ikhadi lokuhlala laseFransi lijoyina iVarte -ukudlula kwakho kwindalo yokuhlawula amayeza, ukuthozama (okanye simahla) ogqirha abacebisayo, kunye nokuhlolwa kweklinikhi kwasimahla onokukufuna kwinyanga enye. Nyanga nganye inqanaba lomyinge liyathathwa kwimbuyekezo yakho kwaye lihanjiswe kwivenkile yakho yezonyango, ngenjongo yokuba undwendwele ugqirha wakho ungafumani nto. Kwimeko apho ulaliswa esibhedlele, eyona ntlawulo ingalindeleka ukuba uyihlawule yi-18 € yonke imihla.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseFrance
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance
Indawo yokuhlala ngokutyala imali eFrance
I-visa yeshishini loosomashishini / imvume yokuhlala okwethutyana esebenzayo iminyaka emi-2 (ivuselelwa emva koko)
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala imali eFrance
Emva kweminyaka emi-5 yokuphila kungaphazanyiswa
Emva kweminyaka eli-10 yokuphila ngokusemthethweni.
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseFrance
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali eFrance
Kutheni usiya kubuhlali ngokutyala imali eFrance
Inkqubo yokuhlala yegolide yaseFrance ijolise kubantu abanenethiwekhi ekumgangatho ophezulu. Ngokwazisa isixa semali esiqingqiweyo, wena kunye nosapho lwakho niza kufumana imvume yokuhlala iminyaka eli-10, nizonwabele ngokulingana nesiFrentshi. Kwindawo yaseSchengen, uya kuba nokufikelela ngokuthe ngqo kukhathalelo lwempilo esemgangathweni yasimahla, amathuba emfundo ekumgangatho wehlabathi, kunye neevisa zokungena ngokupheleleyo. Inkqubo ziinyanga ezi-2 kuphela, kwaye ayifuni naliphi na ithuba lolawulo, ukuhlala ngaphambili eFrance, izakhono zolwimi okanye amandla omzimba, ukuba kukho imfuneko.
Ukufudukela kosapho eFrance
Ungawabandakanya kwangoko amalungu osapho lwakho kwisicelo sakho ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Kwinkqubo yakho yesiFrentshi, iqabane lakho kunye nabantwana abancinci banelungelo.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eFrance
Inkqubo yokwenza isicelo ithatha iinyanga ezimbini kuphela emva kokuba wena kunye nezihlobo zakho nifumana imvume yokuhlala iminyaka eli-2. Awunawo amava obunkokeli bangaphambili, izakhono zolwimi, okanye izihlalo zangaphambili eFrance. Ngaphandle koko, awuzukuhlala eFrance emva kokufumana imvume.
Imfuno yemali yeFrance
Utyalo-mali lunokwenziwa lodwa, kunye nabahlobo okanye amaqabane, okanye njengenxalenye yenkqubo yotyalo-mali evunyiweyo ngabasemagunyeni.
Abangeneleli kufuneka batyale ubuncinci i-10 yezigidi ze-euro kwishishini okanye kwimpahla yorhwebo eFrance. Unako ukutyala imali ngokwakho okanye ngenkampani apho ubuncinci iipesenti ezingama-30 zezabanini. Utyalomali olongezelelweyo aludingeki ukutsala amalungu osapho.
Ukufumana imvume yokuhlala akuthethi ngokuzenzekelayo ukuba uba ngumhlali werhafu waseFrance. Ukuba uchitha ixesha lakho elininzi uphuma eFrance, umvuzo wakho wehlabathi uya kuhlala ungahlawuliswa rhafu kwaye kuphela ziinzuzo zotyalo-mali lwakho eFrance oluya kuchitha.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eFrance
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseFrance kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eFrance ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eFrance ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eFrance, ukuhlala ngokutyala imali evela eFrance kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali ukusuka eFrance okanye kwiVisa yaseGolide evela eFrance okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eFrance okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakumathuba otyalo mali lokuthengiswa kwezindlu eFrance, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IFransi okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eFransi kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eFrance nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseFrance:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeFrance, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eFrance, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eFrance, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali baseFrance, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eFrance kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eFrance.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Visa yegolide eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokusekwe eFrance ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali ezivela eFrance.
Iinkqubo zeVisa zegolide eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eFrance ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eFrance ukuya kumazwe e-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseFrance ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu eFrance ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eFrance, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala imali eFrance. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa abathengisa izindlu eFrance abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eFrance, belanda eyona mbuyekezo.
Ezona nkqubo zintle zokuhlala kwezorhwebo eFrance zityale izindlu nomhlaba eFrance.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona kweFrance ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eFrance kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu acacisiweyo ukuze ube yimpumelelo yokuhlala kwakho ngokutyala imali eFrance. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eFrance okanye e-France, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngotyalomali eFrance kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala eFrance kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eFrance, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eFrance kuya kufuneka sifumane iikopi zokuvavanywa komthengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalomali eFrance Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eFrance kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho eFrance alungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni baseFrance.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eFrance samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eFrance kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eFrance:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eFrance azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eFrance.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo mali eFrance azinikezelwanga ukuba zibekwe esweni ubuGcisa eFrance okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eFrance.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eFrance awanikelwanga ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eFrance.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eFrance ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo eFrance.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eFrance ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eFrance.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeFrance ayifumaneki kubantu baseFrance abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eFrance, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oluntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eFrance ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eFrance ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eFrance.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Fransi ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala eFrance.
Indawo yethu yokuhlala abameli eFrance abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eFrance.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxumi baseFrance ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni eFrance ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eFrance.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo mali eFrance kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu eFrance.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseFrance, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eFrance zibonelela ngamaxabiso aphantsi, ngezinga lempumelelo laseFrance.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona kubabini eFrance ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eFrance.
Indawo yokuhlala enamava ngabaceli botyalo mali baseFrance kunye nabameli bezomthetho baseFrance ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokusingathwa kweFrance kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eFrance nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu yeFrance
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya neFrance, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eFrance kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali eFrance
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi eFrance, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eFrance kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eFrance
Inkqubo yemvume yokusebenza eFrance
Ukuhlala okwethutyana eFransi
Indawo yokuhlala eFrance
Izindlu zoonozakuzaku nabameli baseFrance
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance nakwezinye iiNkonzo
Sibonise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eFrance ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela eFrance nosapho lwakho ngokutyala, thina njengeqabane lakho eFrance, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eFrance ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali eFrance, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiFrance, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseFrance abasenza ivenkile yokumisa iFrance kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eFrance ukufezekisa iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yethu yomthengi engaphaya koBumi ngokutyala imali eFrance ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eFrance nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eFrance okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eFrance zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eFrance
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eFrance uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eFrance kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eFrance, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eFrance
Ngaba ufuna ukubonisana eFrance, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eFrance Njengesango lokuhlawula ngokwesiko okanye le-fintech eFrance okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Fransi ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eFrance ukuqala kwangoko eFrance.
Iinkonzo ze-HR eFrance
yethu Inkampani yabasebenzi eFrance inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba eFrance free.
Iinombolo zeFowuni ezinyanisekileyo zaseFrance
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eFrance kunye amanani afanelekileyo eFrance Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eFrance
Accounting, ngenxa yenkuthalo eFrance nase okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eFrance
Ukuseta ishishini eFrance
Emva kokuhlala ngokutyala imali eFrance, ukuseta ishishini kwi Fransi .
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe apha eFrance
Uyilo lwewebhu eFrance
Uphuhliso lwezorhwebo eFrance
Uphuhliso lwewebhu eFrance
Uphuhliso lweBlockchain eFrance
Uphuhliso losetyenziso eFrance
Uphuhliso lweSoftware eFrance
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo mali eFrance kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iFrance, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eFrance inezona zinto zibalaseleyo zokufudukela eFrance, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eFrance kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseFrance kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eFrance kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, umfazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eFrance, xa imvume yakho yokuhlala eFrance ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseFrance ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuHlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eFrance. Ukuba useFrance okanye uceba ukutyelela iFrance, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani yeFrance ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseFrance. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kuya kufuneka ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseFrance.
Imibuzo ebuzwa rhoqo -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eFrance
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eFrance?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseFrance ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseFrance ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eFrance, ukuhlala kwenkqubo yotyalomali eFrance. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo mali eFrance, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eFrance, indawo yokuhlala elungileyo ngamagqwetha otyalo mali eFrance kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eFrance, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo mali eFrance, kunye neefem eFrance.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eFrance | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eFrance | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eFrance | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eFrance | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseFrance
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eFrance?
Ubummi ngotyalomali eFrance, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseFrance ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseFrance ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl eFrance. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eFrance, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseFrance exhaswa ngabemi beenkonzo zotyalo-mali eFrance, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eFrance, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali eFrance nangobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseFrance. Ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eFrance, kunye neefemu zokubonisana nabantu abafudukela eFrance.
Iinkonzo zoTyalomali ezingenaXabiso eFrance | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eFrance | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eFrance | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eFrance | Abatyali mali abanokufikeleleka eFrance | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eFrance
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eFrance?
Ipasipoti yesibini eFrance, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseFrance ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseFrance ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya eFrance, inkqubo yesibini yepasipoti yeFrance exhaswa yi Iinkonzo zokundwendwela zesibini eFrance, ngokusebenzisa amagqwetha ethu esibini epasipoti eFrance, awona magqwetha esibini eepasipoti eFrance nangabacebisi besibini abaphumeleleyo eFrance, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eFrance, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eFrance.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeFrance | Iiarhente zokundwendwela zesibini eFrance | Amagqwetha esibini epasipoti eFrance | Igqwetha lesibini lokundwendwela eFrance | Abacebisi bokundwendwela besibini eFrance
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide eFrance?
I-visa yegolide eFrance, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eFrance ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseFrance ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eFrance, inkqubo yegolide yeg visa yeFrance exhaswa yi Iinkonzo zevisa zegolide eFrance, ngamagqwetha ethu egolide eFrance, amagqwetha egosa e-visa asezantsi eFrance kunye nabacebisi abaphambili begolide baseFrance, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eFrance, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eFrance.
Iinkonzo zeVisa zegolide zeFrance | Iiarhente zevisa ezimnandi eFrance | Amagqwetha egolide egolide eFrance | Amagqwetha egosa egolide eFrance | Abacebisi begosa begolide baseFrance
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eFrance?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eFrance yi-EUR 10,000,000.
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iFrance yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu eFrance kunye neearhente eFrance zibonelela ngenkxaso kubuhlali ngokutyala imali eFrance.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eFrance kubiza kakhulu?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali eFrance kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo mali yeFrance yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo woboniswano ngokuhlala kwakhona ngoTyalo mali ukuya eFrance, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yokuhlala izisombululo.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali eFrance okanye i-visa yabatyali mali eFrance?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eFrance ukusuka e-Asiya, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eFrance ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eFrance ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eFrance ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eFrance usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona kutyalomali ukuya eFrance usuka e-Bangladesh, Ukuhlala ngokutyala imali ukuya eFrance usuka e-Indonesia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eFrance usuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali usiya eFrance usuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali usiya eFrance usuka eIndiya naseBuhlali ngokutyala imali eFrance ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eFrance
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala eFrance
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eFrance
Impots.gouv (iwebhusayithi yeziphathimandla zerhafu)
Yenza iPlanethi yethu ibe Nkulu kwakhona
Icandelo loMphathiswa Wokuhlangana Kwelizwe
IiVisa zaseFransi (iwebhusayithi esemthethweni yokwenza isicelo se-visa eFrance)
I-OFII (Ukufudukela kwelinye ilizwe laseFransi kunye neOfisi Yobumi)
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo Yesizwe
I-URSSAF (iofisi yokuqokelelwa kwegalelo kwezokhuseleko
Khetha Ummandla weParis
IZiko leLizwe lamaZwe aNgaphandle (i-CNFE)
I-DIRECCTE (Icandelo Lolawulo Lwezemimandla kwiShishini, uKhuphiswano, uKwenziwa nokuSebenza)
I-CLEISS (Umbutho wokunxibelelana phakathi kwamaziko okhuseleko entlalontle aseFransi kunye neqabane langaphandle)
Icandelo loMphathiswa Wezolimo Nezangaphandle
Icandelo loMphathiswa Wezabasebenzi
Icandelo loMphathiswa weSolararity kunye nezeMpilo
Izithethe zaseFransi zeshishini
Icandelo loMphathiswa wezoqoqosho
Iinkonzo Zoluntu (Iwebhusayithi esemthethweni yolawulo ngokubanzi lwaseFrance)
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eFrance , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eFrance